Inhalation yinkqubo yamandulo yokucebisa. Kwaye kwimihla yamandulo sazi ukuba xa i-steam inhaled ihluma kwaye ihlambulule isikhumba, iyayiphucula ngamavithamini, amaminerali kunye nezondlo. Ngeenjongo zokonkcenkceshela, ubuchwephesha bwakutshanje buyasetyenziswa kwikhulu leminyaka lama-21, kodwa inhalation ayizange ilahlekelwe ngumdla, kwaye amaninzi amabhinqa enza i-inhalation ekhaya.
Inhalation yintlobo ezintathu - i-cosmetic, i-preventive kunye neyeza.
Ngoncedo lwe-inhalation yezokwelapha, i-catarrh kunye nokukhwehlela ziphathwa. Ukwenza oku, sebenzisa izityalo zonyango ezinezixhobo ezichasayo, ezifana ne-calendula, i-eucalyptus, i-chamomile.
Ukuphulukiswa kwe-Cosmetic kwenziwa phambi kwenkqubo yokuphilisa okanye yokucoca. Ukuvuthwa ngokuqhelekileyo kusetyenziswa kwilusu elinamafutha, elinamachashaza amnyama kunye namaqondo amakhulu. Ikhumba elinamafutha lisebenzisa i-antibacterial and natural natural anti-inflammatory drugs: i-eucalyptus ioli, iipine, i-grapefruit kunye ne-bergamot, i-infusions ye-sage kunye ne-chamomile. La mafutha kunye nemifuno inokubuyisela umbala wendalo, unciphise ama-pores nokukhusela ukuqala nokuvuvukala kwe-acne. Emva kokuvuthwa kwesikhumba, ikhumba elinamafutha lihlambulukileyo ngamanzi abandayo kunye nokongezwa kwerisi ye-lemon. Kwesikhumba esomileyo, ukuphuza umfutho kwenziwe nge-lime okanye kwintsimbi. Emva kwalolu hlobo, isikhumba sinezityalo kunye naluphi na ukhilimu.
Kwiimeko ezininzi, le mpuphu isenziwa ukukhupha ukuxhatshazwa kunye neziqholo zakho ezizithandayo, ukuphumla. Iibhati kunye neoli ye-buckthorn ye-oil kunye nomthi weeyi kunceda kwimimandla engalungileyo yokulwa ne-virus, ukwandisa ithoni yomzimba. La mafutha aphucisa inkqubo yokuguga, unyuse isikhumba, uyaluncedo ngevithamini.
Benza kunye nasekhaya, kodwa ngaphambi kokuba uphefumle, kufuneka udibane nodokotela wakho. Wonke umntu ubuncinane kanye kanye ebomini bakhe waphilisa ubanda obuninzi, obuncenkcenkceshela i-steam ye-potato broth.
Ukuze inqubo yokuphuza imfuyo kufuneka uyenze: itreyile yombane, isitya esikhulu, i-cream etyayo kunye neepkinskins zamaphepha. Ngaphambi kokuba uqalise ukukhulelwa, kufuneka ususe isakhelo ebusweni bakho. Ukuba unxibe iilensi zokudibanisa, kufuneka uwasuse, kwaye usebenzise ukhilimu kwiibophezelo zakho.
Kwisitya songeza idibansi yeoli ye-flavour kunye ne-infusion yemifuno okanye imifuno eyomileyo (i-celandine, intambo, i-chamomile), isityalo ngasinye sinokusetyenziswa kwiinjongo ezithile. Ngaphambi kokuba uyisebenzise, ​​kufuneka ufunde oko kusetshenziselwa le nto okanye ingca, kwaye ukhethe okulungileyo kuwe. Ukuxhamla okanye amanzi kufuneka athuthuke kwiqondo lokushisa elinokutshisa i-soya. Thatha ithawula, gubungela intloko kunye nemizuzu engama-15 yenze i-steam eshushu.
Kubaluleke kangakanani ukuba wenze okanye wenze i-inhalation ngokuchanekileyo?
Ukuvuthwa akuzange kubangele ingozi, kodwa kuzuza kuphela, kufuneka kwenziwe 2 iiyure ngaphambi kokutya, ngaphandle kokuphazamiseka nokugxininisa ngokupheleleyo kwinkqubo. Imveliso yokwelapha ngexesha lokubilisa inhalation kufuneka ifakwe nge-inhaled and exhaled through the nose or mouth. Emva kokuba nomsindo, ngaphaya kweyure awudingi ukuthetha, bula, ungadli.
I-steam inhalation yobuhle
Iimveliso ezinobungcobo ezisetyenziselwa inhalation, zihlambulule isikhumba, kwaye ngaphantsi kwesenzo se-steam eshushu, ii-pores ebusweni banda kwaye isikhumba sihlambulukile.
Emva kolu hlobo, ulusu luba lula kwaye luvuselele, lufana nosana. Ngaphambi kokuba iinkqubo zonyango zenze i-inhalation. Ngomncedisi we-steam, isikhumba siphucuzwa ngomswakama kwaye isiseko esihle sokhathalelo senziwa. Kubaluleke kakhulu izibini zesikhumba entanyeni nasebusweni, njengoko zibonakaliswe kwimeko engaphezulu.
Ubungakanani be-inhalation buxhomekeke kwesikhumba sakho. Ukuba isikhumba esomileyo, ixesha lokufumbala lifunwa ngaphantsi. Emva kokuvuthwa, kufuneka umise ubuso bakho ngamaphuleki emaphepha, ukutshintshwa kwezinto. Emva koko baqhubeka befaka isicelo sokuhlanjululwa okanye iimfino ezondlo. I-mask isuswe ngamanzi afudumele ukuphucula umphumo we-mask kwaye ufumane umphumo omkhulu, kufuneka ubambe ubuso bakho ngaphezu kwesitya ngaphambi kokuba uphuthumele. Inhalation kufuneka yenziwe ngokuhlwa kanye ngeveki. Kwaye emva kweeyure ezimbalwa, gwema ukusebenzisa iziqhumiso zokuhlobisa.
Ukuphulwa komzimba kuyaphikisana nokwandiswa kweempahla zesikhumba, ngokukhula ngokugqithiseleyo kweenwele ebusweni, ngesikhumba esibuhlungu. Ukuba uxinzelelo lwegazi oluphezulu, luphazamise ukujikeleza kwegazi kunye nomsebenzi wentliziyo, i-asthma ye-bronchial, kufuneka uqhagamshelane nodokotela wakho. Xa unesifo, ungayeki ukusebenzisa ama-herbs namafutha.
Kufika ixesha lemvula kwaye ngeli xesha ungagula ngeendawo ezibandayo. Ezi zintsholongwane zinokuthi zenziwe ngenxa yokubanda ekhaya.
Inhalation kunye neeyeza zonyango
Thatha iipuni ezi-3 ze-mint, i-thyme, i-chamomile, i-eucalyptus, i-pine buds kunye ne-tablespoon yamagqabi omhlathi kunye ne-elecampane.
Yonke igaya kwaye idibanise. Emva koko thabatha ama-20 amagremu okuqokelela imfuyo, uthele iglasi yamanzi kunye nendawo kwindawo yokuhlambela ngamanzi. Yiza umxube ekubiliseni. Gubungela ithawula uze uhobise kuqala ngeempumlo, uze umlomo umzuzu wama-20. Inhalation yenziwe ngaphambi kokulala.
Thatha inxalenye epheleleyo yeentyantyambo zekhamile kunye nokucoca kakuhle. Emva koko uthele lo mxube ngeglasi yamanzi abilayo kwaye uvumele ukuba ufeze ihafu yesure. Emva koko fakela ukumnika umthamo we-1 litre. Gubungela intloko ngehawula, bhonqa phezu kwepeni uze uqhube umphunga kuqala ngeempumlo zakho, uze umlomo umzuzu wama-20. Le ntlungu iya kunceda ngeendawo ezibandayo. Ungasebenzisa i-mint okanye i-sage endaweni ye-chamomile.
Inhalation kunye nobusi
Thatha ubusi bendalo kwaye uwuhluthe ngamanzi abilisiwe afudumele, ngo-1: 5, kwaye usebenzise i-inhaler ukuze uphefise, uphuphe ngeempumlo uze uphume emlonyeni, imizuzu emi-3 ezayo ukuze uphumelele emlonyeni uze uphume ngeempumlo. Ukuxhalabisa okunjalo kunceda ngezifo eziphefumulayo. Kunconywa ukuthatha ubusi ngobusuku, thabatha abantwana ngepaspoon, kunye nabantu abadala kwipunipoon. Ukuba ukuvumba ukudibanisa kunye nokuthatha ubusi ebusuku, oku kuya kukhawuleza ukubuyiswa komntu ogulayo.
Inhalation ekhaya ngeebini zomhluzi wemifuno
Thatha amachule amancinci, ama-beet, izaqathe, amazambane kwaye uthele amanzi. Bese ubilise ngamanzi amancinci. Beka ipenethi etafileni, gubungela intloko ngethawula kwaye uphuze imiphunga yemifuno imizuzu eyi-15 ekuqaleni ngeempumlo, kwaye emva komlomo. Ezi zintsholongwane zinokuthi zenziwe ngamaxesha amaningana, zinceda ngokubandayo.
Ngoku siyazi ukuba yintoni inhalation kwimo yendawo omele uyenze.
Masks ngobuso kwi-apula
Ukwandiswa kwe-eyelasshini, le nkqubo yenziwa njani
Inkomfa yokuzivocavoca ngokubhekiselele kwi-cellulite